Indlu yaseFama yeParadesi-Carno Cottage - I-Airbnb
Indlu yaseFama yeParadesi-Carno Cottage
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJohn
Uguqulo lwethu lwendawo yokutyela olutofotofo lujonge ilizwe elihle lomda waseWelsh kufutshane ne-Offa's Dyke. Yindawo yoxolo olukhethekileyo kunye nokuphumla, kodwa kukwakho nokuhamba okumnandi, ii-pubs, iindawo zokutyela, iigadi kunye nemisebenzi ekufutshane, ukuqala ngePresteigne engaphantsi kweemayile.
IParadesi ibizwa ngokufanelekileyo kwaye siyathanda ukwamkela iindwendwe eziza kwabelana nathi ngale ndawo intle. Kumaqela amakhulu, indlu yaseCarno inokubhukishwa kunye nendlu yaseBedwas esecaleni komnyango.
I-cottage ingena kwinqanaba lokungena kwikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye likhululekile / indawo yokudlela / indawo yokuhlala kumgangatho ophantsi.
Igumbi lokulala elikumgangatho ophantsi lilala abantu ababini kwaye linegumbi lokuhlambela elifikelelekayo elihambelana ngokupheleleyo. Igumbi lokulala eliphezulu (eliyinqununu) linegumbi lokuhlambela eliphangaleleyo.
Iibhedi zikhululekile kwaye zinokulungiswa njenge-Super King (enkulu kakhulu kabini) ibhedi okanye njengeebhedi ezimbini. Njengesiqhelo, igumbi lokulala eliphezulu (eliyinqununu) libekwe kunye nebhedi ye-Super King kunye negumbi lokulala elingaphantsi elineebhedi ezimbini. Nangona kunjalo, nceda usazise kwangaphambili kwaye sinokuphinda siqwalasele iibhedi ukuze zihambelane neemfuno zeqela lakho.
I-cottage ibandakanya zonke iimod cons ezifana nokufudumeza ngaphantsi kunye ne-glazing kabini. Amagumbi okulala anoomabonakude bescreen esisicaba esineFreeview, iDVD player kunye nerediyo yeDAB. Kukwakho indawo yokumamela umdlali wakho weMP3.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ukukuvumela ukuba uzenzele uthando lwakho lokupheka okuvavanywayo, kunye ne-hob yerhasi eneringi ezine, i-oveni yefeni yombane, i-microwave, ifriji kunye nomatshini wokuhlamba izitya.
Indawo yokuhlala ephangaleleyo nekhululekileyo inesixokelelwano sesandi esinonomathotholo weDAB.
4.87 · Izimvo eziyi-45
I-Presteigne, ineevenkile kunye neeresityu, ikumgama nje oziikhilomitha enye. Yidolophu encinci eyonwabisayo kwindlela emnyama nemhlophe. yongeza ngakumbi kwiwebhusayithi
I love to travel and meet people of all cultures. I live in a very beautiful place.
Sihlala emnyango kwaye siyavuya ukunceda ngeemephu kunye nolwazi lwendawo, kodwa ngaphandle koko uzimele ngokupheleleyo kwaye kwi-cottage ezimeleyo, ngoko ukhululekile ukuza kwaye uhambe njengoko uthanda.